Archive du 20200211
Naina Andriantsitohaina Tsy maintsy manenjana raha te hahavita asa haingana
Manomboka hita soritra tsikelikely ny fomba fitantanana nosafidian’ny ben’ny tanàna vaovao Naina Andriantsitohaina ny renivohitra.
Fanapahan-kevitra sy didy avoakan’ny HCC Lasa mampisavorovoro saim-bahoaka fotsiny
Mbola betsaka ny fanehoan-kevitra mandeha mahakasika ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) izay nilaza fa nomena fe-potoana ny fitondram-panjakana hampita amin’ireo didy hitsivolana maro izay mila hampandalovina eny amin’ny Antenimieram-pirenena mba hampanankery azy ireny.
Tompondakan’ny tsy fanjarian-tsakafo Afaka mirehareha tokoa ve ny Malagasy ?
Mandeha amin’izao fotoana ny fivoriana eo amin’ny vondrona afrikanina any ivelany. Ireharehana ny fanendrena ny filoha Rajoelina ho tompondakan’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Sazy avy amin’ny FIFA Manazava i Dax
Nitsimbadika indray ny rasa. Nosazian’ny FIFA, Federasiona iraisam-pirenena ho an’ny baolina kitra, tsy mahazo milalao mandritra ny efa-bolana sy mandoa onitra 157 572 000Ar i Andriamirado Arohasina na i DAX, mpilalao ao amin’ny Barean’i Madagasikara.
Fitaterana eto Antananarivo Fiara miisa 133 naiditra « fourrière »
Nisy ny fitsirihana tampoka « Opération contrôle inopiné » nataon’ny DGSR (Diréction Générale de la Sécurité Routière) teto Antananarivo sy ny manodidina ny 3-9 febroary 2020.
Fanafarana sakafo avy any ivelany Ilàna fanaraha-maso akaiky
Nisy ny atrikasa fanofanana ho an’ny famolavolana rafitra fanaraha-maso ny sakafo hafarana avy any ivelany izay nanomboka omaly 10 febroary ary ho tapitra ny 13 febroary ho avy izao.
Olana ara-toekarena iraisam-pirenena Mihena ny fifanakalozana ara-barotra
Ny fampiasana vola any ivelan’ny firenena na ny Investissement Direct Etranger (IDE) dia nahazoan’ireo firenena nanao izany tombony avokoa.
Fanorenana tohodrano any Lesotho Olona 8000 no very fivelomana
Nisy ny fanorenana tohodrano izany nanala olona efa ho 8.000 tany Polihali Lesotho.
TOAMASINA Hita omaly ny razan’ílay tovolahy lasan’ny ranomasina
Omaly maraina vao hita ny vatana mangatsiakan’ilay lehilahy iray manodidina ny 21 taona lasan’ny ranomasina teo akaikin’ny camp Miaramila ao Toamasina ny alahady 09 febroary teo.
KAOMININA AMBOHIDRATRIMO Mpiasa 100 natsahatra tamin’ny asany
Mpiasa miisa 100 amin’ny 107 isa teo anivon’ny kaominina Ambohidratrimo, no fantatra fa natsahatry ny Ben’ny tanàna vaovao ankehitriny tamin’ny asany.
Fiparitahan’ ny rongony Mila hentitra ny fitondrana
Betsaka ny olom-pirenena no manao antso avo fa lasa misy fiantraikany amin’ ny fiainam-piaraha-monina ny rongony. Raha tsiahivina, telo lahy no saron’ ny polisim-pirenena nitaona rongony telo gony tetsy Ankorondrano ny zoma alina lasa teo.